အမြင်ကလေးများ | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ
အမြင်ကလေးများ	December 10, 2009
6 Responses to “အမြင်ကလေးများ”
ကျွန်တော်လည်း တချိန်က ဘာသာနှစ်ခု အကြား အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်။ဖန်ဆင်းခြင်း ကို လက်ခံခဲ့ခြင်းကြောင့် ခရစ်ယာန် ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဖန်ဆင်းခြင်း အကြောင်း အ ရာ ငြင်း၍ မရပါ။ စင်္ကြာဝဠာ၏ တိကျသော အချိန်နာရီ အကြောင်း ဆင်ခြင်ယင်း တန်ခိုးရှင် ရှိလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိသည်။ ထိုမှတဆင့် ခေါ်ကြည့်သော အခါ အကြိမ် ကြိမ် ထူးကြောင်းကို တွေ့ရပါသည်။ ယေရှုခရစ်ကို လက်ခံခဲ့ခြင်း ကြောင့် ပြောင်းလဲ သော အသက်တာသစ်ကို တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပါသည်။ ယေရှုခရစ် အားဖြင့်ခံ စား ရ သော အသက်တာနှင့် အတွေ့အကြုံများသည် အခြား ဘယ်အရာနှင့် မျှ နှိုင်းယှဉ်၍ မရပါ။ မြန်မာပြည်ရှိ လူတိုင်း ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရား ကို သိလာရန် ဆုတောင်း ပေးကြပါ။
Saw Aung Naing ရေ… စင်္ကြာဝဠာရဲ့တည်ငြိမ် တိကျသော ဖြစ်စဉ်… ဖြစ်ပေါ်လာဖို့… (the whole cosmic process) ဖြစ် ခဲ့ရ၊ ပျက်ခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေအားလုံးကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ.. သိပ္မံကို လေ့လာလေလေ … မမြဲ ၊ ဆင်းရဲ ၊ အစိုးမရ ဆိုတဲ့ ရုပ်သဘော ၊ နာမ်သဘော တွေရဲ့…အရှိ သစ္စာ တရားတွေကို ထင်ထင် ရှားရှား … မြင်လာပါလိမ့်မယ် …
ကျွန်တော်တို. မြန်မာ လူမျိုးများသည် မိရှိးဘလာ ကိုးကွယ်သည်ဟုတ် ပြောတတ်ကြသည်။ဗုဒ္ခဘာသာဆိုင်ရာ စာပေတွင် ထို စကား လုံးမတွေ့ ရပါ ။ခရစ်ယန် ကျမ်းစာ ၌သာ တွေ.ရသည်။ မိတ် ဆွေဖတ်လိုပါက (က ၂-၂၁-၂၄)ထိဖတ်ပါ အားလုံး သိကျစွာ တွေ.မည်ဖြစ် သည်။ အထက်က အကြောင်း အရာ လေး ကိုလူတိုင်းသိလာဖို.မိတ်ဆွေ နဲ့ ကျွန်တော် ဆုတောင်းဖို့ လိုသည်။
juni htet Says:
ဗုဒ္ဓရှင်တော်နဲ့ ယေရူဟာ နှိုင်းယှဉ်စရာလား ?
ဘုရားမဖြစ်ခင် လူ့ဘဝမှာကို နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့
ရေလှိုင်းတွေကို ငြိမ်သက်စေတာတို့l ရောဂါ
ပျောက်စေတာတွေက သာမည အလုပ်တွေပါ ။